मिस नर्स चितवनको अन्तिम प्रतिस्पर्धामा १३ नर्स उत्रिँदै बुधबार, मंसिर १३, २०७४
रेडियो नाटककी नर्सबाट प्रभावित भएर बनें अनमी शनिबार, मंसिर ९, २०७४
नर्स जानकीको सौन्दर्य यात्रा मंगलबार, मंसिर ५, २०७४
नयाँ स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदामा यस्ता छन् नर्सका विषय आइतबार, कात्तिक ५, २०७४
ड्युटीका कारण साइतको भाइटीका छुट्यो बिहीबार, कात्तिक २, २०७४
सिन्धुपाल्चोक पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषित पूर्ण खोप राष्ट्रिय निर्देशिकाको तालिकाअनुसार बालबालिकाले सबै प्रकारको खोप लिइसकेकाले आजबाट २९औँ पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा गरिएको हो। बुधबार, भदौ १४, २०७४
नर्सका आँसुले कहिलेसम्म अस्पताल चलाउने? नर्सका हकहितका लागि खुलेको नेपाल नर्सिङ संघ नर्सका आँसु पुछ्न छाडेर कहाँ हराएको छ? चुनावका बेलामा चर्का नारा लगाउने नर्सका नेताहरु यो विषयमा किन बोल्दैनन्? कतै उनीहरुले पनि निजी अस्पताल सञ्चालन गरेर आफैँ जुनियर नर्सहरुमाथि शोषण त गरिरहेका छैनन्? सोमबार, फागुन १७, २०७२
अन्यायविरुद्ध लड्न हामी तयार छौँ अब नर्सहरुमाथि भइरहेको शोषण अन्त्यको ताली बजाउनुपर्छ। ताली बज्न दुई हात चाहिन्छ। त्यो दुई हात भनेका सिनियर नर्स र जुनिएर नर्स हुुन्। नेपाल आइएलओको सदस्य भएको वर्षाैं बितिसकेको छ। तर, अझै शिक्षितमाथिकै श्रम शोषण हट्न नसक्नु जस्तो दुर्भाग्य अरु के हुन सक्छ? आइतबार, फागुन ९, २०७२